UMaharaj uphinde wathi 'ngqotho mfana' kwiBangladesh - Impempe
UMaharaj uphinde wathi ‘ngqotho mfana’ kwiBangladesh
April 11, 2022 Impempe.com
UKeshav Maharaj ukhethwe njengomdlali oshaye into ecokeme kwiTest yesibili, nasochungechungeni lwemidlalo emibili iNingizimu Afrika ebiyidlala neBangladesh kuleli.
INingizimu Afrika ikhale yemuka nochungechunge lwemidlalo emibili yamaTest, ngemuva kokushaya iBangladesh ngama-run angu-332 osukwini lwesine eSt George’s Park, eGqeberha, ngoMsombuluko.
KwiTest yokuqala eThekwini amaProteas ashaye into ecokeme ewina ngama-run angu-220. Kulowo mdlalo uMaharaj uthathe amawikhethi ayisikhombisa kwi-innings yesibili.
Akagcinanga lapho uMaharaj njengoba ephinde wathatha amawikhethi ayisikhombisa eGqebehra, washaya nama-rum angu-80 abalulekile.
UMaharaj uncome ukudlala kahle kwabo njengeqembu kuyona yomibili imidlalo.
“Lonke iqembu kumele linconywe ngokwenza kahle libhetha noma selishwiba. Ngicabanga ukuthi uDean (Elgar) wenze kahle esihola, lonke iqembu lidlale kahle kule midlalo,” kusho uMaharaj ngemuva kweTest yesibili.
Lo mdlali uthe yena akalokhu ebuka izinombolo uma edlala ikhilikithi kodwa uyadlala nje. UMaharaj uyena osehamba phambili ngokuthatha amawikhethi kubadlali baseNingizimu Afrika abashwiba nge-spin. Usethathe awu-150 wadlula abadlali abafana noPaul Adams owagcina ethathe angu-134.
“Angibuki ukuthi ngenza kanjani ngokwezinombolo. Uma sengithe khumu kulo mdlalo ngiyobuka izinombolo zami ngibone ukuthi ngenze ngendlela ekahle yini,” kusho uMaharaj ongaziphakamisi nakancane.
Emidlalweni ezayo yamaProteas azovakashela i-India ngoJuni lapho ezodlala khona imidlalo emihlanu yeT20. Ukusuka lapho azobe eselibangisa e-England lapho ezodlala khona imidlalo emithathu yosuku olulodwa nemithathu yeT20 ngoJulayi.
Imidlalo yeTest elandelayo ezodlalwa yiNingizimu Afrika yilapho izobhekana ne-England ekuhambeni ngo-Agasti kuya kuSepthemba emidlalweni emithathu.
Previous Previous post: ITuks izosebenzisa ekufunde kwiNedbank ukuwina isicoco seChampionship
Next Next post: UMaduka uthi bebazi bazogcina beyiThwahlazile iTuks